::ဓ မ္မ စ ကား နေ့ တိုင်း ကြားက၊ စိတ် ထား ဖွေး လက် သိ ဥာဏ် ထက် ၏::: LUCK
သတိတရလာလည်ပေးသည့် သူငယ်ချင်းများအားလုံး ယနေ့အဖို့အထူးတလည်ကံကောင်းပါမည်
မယုံမရှိနှင့်။ လူတိုင်းကိုယ်စီတွင် ကံကောင်းခြင်းများရှိနေပါသည်။ အနည်းအများသာကွာခြားပါလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်- စာမေးပွဲအတွက် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ကံကောင်းခြင်းလေးများ နဲနဲစီ ကွန်းမန့်ထဲ ထဲ့ပေးခဲ့ကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, September 05, 2007
စာမေးပွဲဖြေနိုင်ပါစေဗျာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကံကောင်းခြင်းတွေ အကုန်ယူသွားပါ။ ကျွန်တော်က စာမေးပွဲဖြေရင် ကံကောင်းနေကြ အမြဲ စာရတဲ့သူနဲ့ တွဲကျတယ်။ စာမရဘဲ ဂုဏ်ထူးတောင်ထွက်တယ်။ ကံကောင်းခြင်းတွေ အငှားချထားလိုက်မယ် ၁ ရက် သိန်း ၅၀ လောက်နဲ့ =) စာအရင် မကျက်ခင် ကျွန်တော်ဘလော့ခ်က http://tayzar44.blogspot.com/2007/08/cheat-in-exams-using-adhesive-tapes.html စာမေးပွဲ ဖြေဖို့ ပြင်ဆင်ပုံ ပို့စ်လေးကို အရင်ဖတ်သွားပါ။ =)
Good luck for ur exam Usagi!
I also have to finish my assignment on 7.
Snow Wolf said...
ဆဂိရေ... ကံကောင်းခြင်းတွေ ရရှိနိုင်ပါစေဗျာ..
နာကစာသိပ်မရပေမယ့် စာမေးပွဲဖြေရင်တော့ ကံကောင်းတာများပါတယ်။ မျှဝေပေးပါတယ်ဗျာ...
ညီမလေး ဆဂိရေ.. စာမေးပွဲကံ ကောင်းပါစေ..
အပ်မိန်လဲ စာကြည့်ရမှာ အရမ်းပျင်းတယ်... ကံကကောင်းချင်တော့လဲ... စာမေးပွဲတိုင်းမှာ ကြည့်တဲ့စာတွေပါတာများတယ်.. ခွီ..ခွီ..ခွီ.. :D
ကဲ.. ကံကောင်းခြင်းတွေ comment ထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါပြီ။
စာမေးပွဲ အောင်ပါစေဗျား ... မြန်မြန်ပြန်လာပြီး ပို့စ်အသစ်တွေလည်း များများတင်နိုင်ပါစေလို့ ... :D
ကံကောင်းချင်း ထည့်ပေးလိုက်တယ် :)
မမြရွက်ဝေ ၊ ကိုတေဇာ ၊ ကိုစိုင်းစိုင်း ၊ ကိုသန့်ဇော်မင်း ၊ ဦးnaing ၊ အန်တီလေးမ ၊ မမအပ်မိန် ၊ မရန်ကုန်သူ ၊ ကိုအဉ္ဇလီ ၊ MgThaJan
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဒီနေ့ဖြေမှာပါ..ဖြေမဲ့နေ့မှာ ကွန်းမန့်ကိုဖွင့်လိုက်တော့ နောက်ထပ် ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိနေတဲ့အတွက် ဆဂိ အတွက် good luck နိမိတ် လို့ခံစားရပါတယ်။
စာမေးပွဲကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြေဆိုနိုင်ပါစေဗျာ။